URomeo noJuliet yiDire Straits - Izinto Zobugcisa
URomeo noJuliet yiDire Straits
Le ngoma yaphefumlelwa nguMark Knopfler yothando olwaphukileyo kunye noHolly Vincent, owayeyinkokeli yeqela uHolly kunye namaTaliyane. Amanye amazwi abonisa ukuba uKnopfler waziva emsebenzisela ukomeleza umsebenzi wakhe.
Umgca, 'Ngoku uthi, oh Romeo, ewe, uyazi ukuba bendikhe ndaba naye,' wavela kudliwanondlebe apho uHolly Vincent wacatshulwa esithi: 'Into eyenzekileyo kukuba bendinomboniso noMark Knopfler Kwaye kwafikelela kwinqanaba lokuba angakwazi ukuyiphatha kwaye sahlukana. '
Umninawa kaKnopfler omncinci uDavid, isigqi segitare kwi-Dire Straits, walishiya iqela ngexesha leseshoni yealbhamu. Ukuba nabazalwana ababini kwiqela elinye kwabangela ukungavisisani kunye neengxabano. UDavid wathi: 'Ndihambile kuba bekungasenakwenzeka ukuba mna noMark sisebenze kwiqela elinye. Siza kuhamba sijikeleza studio kwaye amehlo aphakanyiselwe phantsi. Besingasakwazi ukunxibelelana. '
URoy Bittan ovela eBruce Springsteen's E Street Band badlale iikeyboard kwi-albhamu.
UmKristu-uCopenhagen, eDenmark, kuzo zonke ezi zinto zingasentla
Le ngoma imalunga nesibini esithandanayo, kodwa bayahlukana kuba 'Ixesha belingalunganga.' Luvo olubuhlungu, kuba umntu uya kuhlala eyithanda intombazana.
Oku kudlalwa kumdlalo bhanyabhanya Iirekhodi zoBukhosi , nangona ingabonakali kwisandi.
I-Dire Straits ibhale ingxelo ethandwayo kwi-albhamu yabo Ngobusuku .
IBertrand-Paris, France, ngaphezulu kwe-3
Ukwenza iiMovie yabhalwa kwiSikhululo saMandla kwisiXeko saseNew York kunye nomvelisi uJimmy Iovine. Wayengunjineli / umxubeki eBruce Springsteen's Uzalelwe ukubaleka kunye nomvelisi kaPatti Smith iPasika .
Ababulali bakugubungele oku kumacala abo e-B e-2007, amaqweqwe kunye nokuhlanganiswa kokunqongophala I-Sawdust . Kudliwanondlebe kunye Q Imagazini kaJanuwari 2008, umbethi weqela lomculo uRonnie Vannucci ucacisile ukuba kutheni bekhethe le ngoma: 'Sigubungele iRomeo noJuliet' kuba yingoma emnandi- uBrandon wayekuyo. Umbono wokuqala yayikukucula ingoma noJohnny Borrell (Vocalist weqela laseBritane uRazorlight) nangona kunjalo, kodwa wagula kakhulu wangakwazi ukuyenza. U-Frontman Brandon Flowers wongeze wathi: 'Asinaxhala kakhulu malunga ne-Dire Straits, nangona kunjalo. Asinazintloni zokugubungela 'iRomeo noJuliet,' nokuba. Enye yeengoma ezigqwesileyo. Iingoma ezimnandi. '
Umgca, 'Ungaphantsi kwefestile ayiculayo,' hey la umqolo wesithandwa sam '' kubhekiswa kwiiNgelosi 'zika-1963 ezibetha' Umva Womfana Wam. '
mfazi ndibambe ezandleni zakho
undithathe nge joker engalindelanga
obhale ngoncedo oluncinci oluvela kubahlobo bam
lithetha ntoni lonke ixesha eliphantsi
heine yomntu uyayxinanisa ibhokisi yam yomkhenkce
utata roach ikrazule intliziyo yam